Iska tag Turkiyoow Muqdisho ma aha meel laga macaasho!! | Maanta Online
Home / Faallo / Iska tag Turkiyoow Muqdisho ma aha meel laga macaasho!!
Posted by: admin in Faallo, Wararka November 8, 2014	Comments Off on Iska tag Turkiyoow Muqdisho ma aha meel laga macaasho!! 245 Views
Waxaa sii kordhaya weerarada, qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee lala bar tilmaameedsanayo madaxda, saraakiisha iyo shaqaalaha u soo shaqo tegay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo kalsooni aan si dhab ah looga fiirsan ka helay Dowladda Federaalka Soomaaliya bacdamaa Dowladda iyo shacabka Turkiga ay gurmad u fidiyeen Soomaalida xilli ay abaaro baahsan ku dhufteen gobolada dalka intooda badan.
Dagaalka ka dhanka ah muwaadiniinta Turkiga ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu sii laba kacleeyay kaddib markii ay cunaha qabteen kumanaan ruux oo Soomaali ah, kuwaasi oo ay ku jiraan dad xoogsato ah oo ka xamaalan jiray Kaawooyinka ku yaala hareeraha magaalada Muqdisho, shaqaalaha dhisa guryaha oo Turkigu iminka si rasmi ah loogu saxiixay qandaraaska lagu dhisayo goobo dhowr ah oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Kumanaankaan shaqaale ee xoogsatada ah oo Turkigu kala wareegay shaqadooda ayaa maanta waxaa soo wajahay xaalad nolol xumo, waxaana ugu sii daran garab raratada Dekedda Muqdisho oo tiradoodu ka badan tahay ilaa 10-Kun qof, kuwaasi oo Turkigu kansalay boosas ay ku lahaayeen xamaaliga Dekedda Muqdisho, isla markaana tiro yar oo ka mid ah xoogsatadaasi haatan si cad u diiday inuu bixiyo kharajkii ay u soo dhidideen.
Ma aha wax halkaan lagu soo koobi karo duruufaha nololeed oo soo wajahday qoysaskii ay ka soo jeedeen shaqaalahaan muruqooda maali jiray ee Turkiga uu kala wareegay goobihii ay ka xamaalan jireen oo aan kor ku soo sheegnay iyo waliba goobo kale oo ay ka mid yihiin ilihii dalka ugu dhaqaalaha roonaa.
Shaki iigama jiro in cadaawada loo qabo muwaadiniinta Turkiga ku sugan Muqdisho ay sii kordheyso mar haddii uu u soo dhigtay inuu cunaha qabto dadka dhididkooda maala ee aadka u danta yar.
Waa jiraan ajaanib ka socota dalal fara badan oo iyagu u soo shaqo tegay magaalada Muqdisho, hase yeeshee way ka duwan yihiin Turkiga, iyagu marnaba ma damcaan shaqooyinka ay qabtaan dadka danta yar ee waxay ka macaashaan meelo sarsare iyo barnaamijyo aan wax saameyn ah ku laheen shaqada ay leeyihiin dadka dalka iska leh.
Arrintu si kastaba ha ahaatee waxaa kale oo aan shaki ku jirin in qasaaraha gaaraya madaxda iyo saraakiisha hay’adaha Turkiga macaashka ka soo raadiyay Muqdisho, haddii aanay faraha kala bixin cuna qabateynta ay ku hayaan muwaadinka Soomaaliyeed oo intii uu gaajo u dhiman lahaa ay uga roon tahay inuu geeriyoodo.
Waxaa Qoray: Jabriil Maxamuud Nuur (Jabra)
Previous: Siyaarada caalimkii weynaa ee Sheekh C/raxmaan Celi oo ka dhacday degmada Warsheekh + Sawirro
Next: Xildh. Xaabsade: “Haddii Wasiir la bedelay ma aha in la burburiyo xukuumadda iyo qalad ka yimid Dastuurka dalka”